ကဆြငျးလာတဲ့ ကစားသမားအရအေတှကျ နှငျ့ Gabe Newell က ဘာလို့ Dota2ကို ဂရုမစိုကျတော့တာလဲ ? – Gaming Noodle
October (၃ဝ) ရကျနကေ့ Wykrhm Reddy ရဲ့ Tweet တဈခုကို ဖတျလိုကျရပါတယျ။ Reddit User တဈဦးက Dota2Update တဈခု ထုတျပေးဖို့ တောငျးဆိုထားတဲ့ Thread အောကျမှာ Valve ရဲ့ ဝနျထမျးတဈဦးဖွဈတဲ့ Cameron က reply ပွနျထားတဲ့ Comment ကို ဖျောပွထားတဲ့ အကွောငျးဖွဈပါတယျ။
အကွောငျးအရာက “Outlander Update ကို ပထမဆုံး Major အပွီးမှာ ထုတျပေးမှာဖွဈပွီး Update ရကျ ကိုတော့ အတိအကြ ဖျောပွဦးမှာ မဟုတျပါဘူး၊ ရကျအတိအကြ ပွောထားပွီးမှ Update အတှကျပွငျဆငျဖို့ အခြိနျအနညျးငယျလိုအပျတာနဲ့ ကွုံရငျ ကွိုပွောထားတဲ့အခါ အဆငျမပွမှောဆိုးလို့” ဆိုတဲ့ သဘောမြိူး ဆောငျတဲ့ Comment ဖွဈပါတယျ။
DPC ပေးမယျ့ ပထမဆုံး Major ပွိုငျပှဲဖွဈတဲ့ MDL Chengdu Major ဟာ November 24 မှာ ပွီးဆုံးမှာဖွဈပွီး Outlander Update teaser ကို ကွညောခဲ့တာကတော့ သွဂုတျလ (၂၃) ရကျနေ့ ဖွဈပါတယျ။ Update ကွညောခြိနျနဲ့ ပထမဆုံး Major ပွီးဆုံးတဲ့အခြိနျဟာ (၃) လ တိတိ ကှာခွားပါတယျ။ အဲ့ဒီ့နအေ့ထိတောငျ Update ထှကျဖို့က တိကသြခြောတဲ့ ရကျစှဲတဈခုကို မပေးနိုငျသေးဘူးဆိုတဲ့ reply ဟာ Valve ရဲ့ Dota2အပျေါ တိုကျရိုကျသကျရောကျနတေဲ့ လကျရှိအခွအေနတှေကေို ဖျောပွလကျြရှိပါတယျ။
ဟုတျပါတယျ။ Dota2ဟာ (၆) နှဈ နီးပါး ကာလအတှငျးမှာ အဆိုးရှားဆုံး ကစားသမားဦးရေ အကဆြငျးဆုံး အခွအေနနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေတာပါ။ Community ကနေ ဖွဈပျေါလာတဲ့ Video Game တဈခုဖွဈတဲ့ Dota ဟာ Community ရဲ့ လိုအပျခကျြကို မဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျတဲ့အခါမှာ ဆိုးရှားတဲ့လမျးစဉျဘကျကို တဖွညျးဖွညျးခငျြးစီ ဦးတညျနတောဖွဈပါတယျ။
အဓိက လိုအပျခကျြတှအေကွောငျးပွောတဲ့အခါမှာ Game က အထိုကျအလြောကျ Update ဖွဈရဲ့လားဆိုတာကို ဦးစှာပွောဖို့ လိုပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ TI9 မှာ အသုံးပွုခဲ့တဲ့ v7.22f ရဲ့ မူလဖွဈတဲ့ v7.22 ဟာ မလေ (၂၄) ရကျမှာ ထှကျရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ TI မှာ အသုံးပွုဖို့ Patch ဖွဈတာကွောငျ့ TI ထကျ (၃) လ စောပွီး ထှကျထားတဲ့ မွပေုံကို Balance Change တှေ အထပျထပျပွုပွငျပွီး v7.22f ကို အသုံးပွုတယျဆိုတာ ပုံမှနျလမျးစဉျတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Premium တနျးက Player တှအေတှကျ Patch တဈခုကို အမြားတနျးတူ အသုံးပွုပေးပွီးတဲ့အခါ TI အပွီးမှာ ဒီ Patch ကွီးကို (၃) လ ကြျော ကွာအောငျ ငွီးငှနေ့တေဲ့ Public matchmaking တှအေတှကျ Update တဈခုက မဖွဈမနေ ထုတျပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ အခု Valve ရဲ့ လုပျရပျဟာ TI Patch ကို Balance Change (၂) ခါ လုပျပေးထားတာထကျ မပိုတဲ့အတှကျ Public Matchmaking တှရေဲ့ Meta ဟာ (၅) လ ကွာအောငျ မပွောငျးလဲတဲ့ Meta အဟောငျးကွီးဖွဈနဆေဲပါပဲ။ အခု ထှကျလာတဲ့ သတငျးအရ ဒီ Meta အဟောငျးကွီးကို နောကျထပျ တဈလ လောကျ ပွောငျးလဲဖို့ ရှိဦးမှာ ဆိုတာကတော့ နှဈတဈဝကျစာ မပွောငျးလဲတဲ့ Meta အပျေါ Casual Player တှအေတှကျ စိတျပကျြစရာဖွဈလာတာဟာ မွငျသာတဲ့ ကိစ်စ တဈခုဖွဈပါတယျ။
၂။ Game Experiences
တဈခြိူ့ကိစ်စတှကေ ပိုကောငျးဖို့ စီစဉျကာမှ လှဲခြျောသှားတာမြိူးတှလေညျး ရှိတတျပါတယျ။ (ကောငျးပမေယျ့ လူတှေ လိုခငျြတာနဲ့ ထပျတူ မကနြိုငျတဲ့ အခွအေနမြေိူးကို ဆိုလိုတာပါ) Dota ဟာ အပေါငျးအသငျးမြားနဲ့ ကစားတဲ့အခါ အကောငျးမှနျဆုံး ဂိမျးအတှအေ့ကွုံကိုရရှိမှာ မှနျပမေယျ့ အပေါငျးအသငျးမြားနဲ့ မဖွဈမနေ ကစားဖွဈအောငျ ပွောငျးလဲပေးလိုကျတဲ့ Core MMR, Support MMR စနဈဟာ ဘေးထှကျဆိုးကြိူးမြား နဲ့ ကွုံတှခေဲ့ရပါတယျ။ ပထမဆုံးအခကျအခဲအဖွဈ Skill bracket မတူတဲ့သူ (၂) ဦးက Role Abuse လုပျပွီး Rank တငျတဲ့ ပွဿနာကို Public Matchmaking တှမှော အလူးအလဲ ခံခဲ့ရပါတယျ။ ဒုတိယအခကျအခဲအဖွဈ Party 3-1-1 team vs5party ပွဿနာမြိူးကို ဖွရှေငျးဖို့ Strict Solo Queue ကို ပယျဖကျြလိုကျရာမှ Queue time ပိုကွာတဲ့ ပွဿနာနဲ့ Immortal player တှကွေားမှာ Ancient Bracket အထိ ပါဝငျလာတာမြိူးတှေ ကွုံလာရပါတယျ။ တတိယပွဿနာကတော့ Toxicity ဖွဈပါတယျ။ Skill Bracket မြှတမှု မရှိခွငျး၊ Full party အမွဲမရှိနိုငျတဲ့ ကစားသမားတှအေတှကျ Fully Party သမားတှကေို နိုငျဖို့ ခကျခဲခွငျး၊ Behavior score အပျေါလှနျစှာ အခွခေံသညျ့အတှကျ ခွခြေျောလကျခြျောဖွဈပွီး Behavior score ကသြှားသော ကစားသမားတှအေတှကျ ဆိုးရှားတဲ့ Game အတှအေ့ကွုံမြား စသညျ့အခကျြမြားကွောငျ့ ကစားသမားတှရေဲ့ Toxicity ဖွဈမှုဟာ လှနျစှာ မွငျ့မားလြှကျရှိနပေါတယျ။ Valve ဟာ Cheater တှနေဲ့ Toxic ဖွဈမှုတှကေို ကောငျးကောငျး ကိုငျတှယျဖွရှေငျးနိုငျစှမျး အခုခြိနျထိ မရှိသေးပါဘူး။
[image source: Paladins]
၃။ Player Experiences
Game တဈခုကို ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ လူတနျးစားမှာ Hardcore player နဲ့ Casual player ဆိုပွီး (၂) မြိူး ကှဲပွားပါတယျ။ Dota2ဆော့ရတဲ့ လကျရှိရညျရှယျခကျြဟာ MMR ဆိုတဲ့ ကိနျးဂဏနျးလေးတှေ တကျဖို့တဈခုတညျးသာ ရှိနတောက Casual Player တှမြေားစှာ စှနျ့ခှာသှားရတဲ့ အဓိက အကွောငျးအရငျးပဲဖွဈပါတယျ။ Dota2မှာ Daily Login Bonus, Weekly Rewards, Good player Awards, Free Challenges, Montly Quest တှေ ဘာမှ မရှိတဲ့အပွငျ Event တှလေညျး လုပျပေးလေ့ မရှိပါဘူး။ အခုကာလ အပိုငျးအခွားဟာ Halloween ကာလဖွဈပွီး အခွားသော League of Legends, PUBG, Overwatch, Fortnite, Apex Lgends စတဲ့ Competitive Video Game တှမှော Event တှေ ရှိနပေမေယျ့ Dota2ကတော့ ဒီနှဈ Outlander Update အတှကျ အခြိနျပေးနရေလို့ ဘာ Event မှ ရှိမှာ မဟုတျဘူးဆိုတဲ့ Announcement တဈခုသာ ထှကျလာခဲ့ပါတယျ။ Livestreaming, Casual Player တှဆေီကနေ ဈေးကှကျမြားစှာ ရရှိနိုငျတဲ့အတှကျ Valve ရဲ့ ခတျေပွိုငျ PC Game Company ကွီးတှဖွေဈတဲ့ Epic, Blizzard, Riot, Electronic Arts တို့ အသီးသီးက အပွိုငျအဆိုငျ Player မြားကို ဆှဲဆောငျနတေဲ့အခြိနျ Valve ကတော့ Casual Player တှကေို ဆှဲဆောငျ ထားမယျ့ အခကျြတှအေပျေါ ဂရုစိုကျခွငျး မရှိပါဘူး။ တဈလကို $4 ပေးရတဲ့ Dota Plus Features ဟာလညျး ၁ နှဈမှာ တဈခါလောကျသာ Update လုပျလရှေိ့တဲ့ စိတျဝငျစားစရာ ထှထှေထေူးထူး မရှိသော Features ကွီး ဖွဈနပေါသေးတယျ။ ဒါကွောငျ့ Reward ထှထှေထေူးထူး မရှိတဲ့ Dota2ဟာ MMR ကို စိတျအပငျပနျးခံပွီး တငျမနခေငျြတဲ့ Casual player တှအေတှကျတော့ Login ဝငျစရာ အကွောငျးပွခကျြ နညျးပါးသှားတဲ့ Game တဈအခုဖွဈလာပွီး Event ကာလမှာ Event ရှိတဲ့ Game တှဆေီကို ရောကျသှားတာမြိူးတှကွေောငျ့ Player Count တှေ သိသိသာသာ ကဆြငျးလာပါတယျ။
[Image Source: World of Warcraft / Battle for Azeroth Cinematic Trailer]
၄။ No Promotions
ဒီခတျေကွီးဟာ Free to Play Game တို့ရဲ့ ခတျေဖွဈပါတယျ။ Game အသဈတဈခုကို စမျးဆော့ကွညျ့ခငျြတဲ့ Casual Player တဈယောကျဟာ ပထမဆုံး အဲ့ဒီ့ Game ရဲ့ Cinematic Trailer ကို အရငျ ကွညျ့ပါတယျ။ အဲ့ဒါက Hype ရငျ Hype သလောကျ စမျးဆော့ကွညျ့မယျဆိုပွီး စတငျလရှေိ့ပါတယျ။ အဲ့လို Player တှေ မိမိဂိမျးကို ရောကျရှိလာတဲ့အခါ Skin/ Battle Pass/ Tournament တှေ လုပျပွီး ဂိမျးကုမ်မဏီတှကေ ပိုကျဆံ ပွနျရှာကွပါတယျ။ ဒီလို Skin/ Battle Pass တှဟော လူတိုငျးမဝယျနိုငျပမေယျ့ Casual player, streamers, whale တှဆေီကနေ လှယျလှယျကူကူ ရရှိနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဂိမျးကို ဒီလို Player စိတျဝငျစားဖို့နဲ့ Player Base တကျလာအောငျ ဆှဲဆောငျကွရပါတယျ။ Cinematic မြား၊ Comic မြား၊ Event မြား၊ Communication မြား၊ Animated Short Clip မြား၊ ကွျောငွာမြား၊ Game Universe နဲ့ပတျသတျသော Lore မြားအကွောငျး စသညျ့ Promotion မြားက New players မြားကို အဓိက ဆှဲဆောငျတဲ့ အခကျြဖွဈပါတယျ။ ဆယျစုနှဈ တဈခုရှိပွီဖွဈတဲ့ Dota2ရဲ့ Universe ဟာ ရှငျးလငျးဖျောပွထားခွငျး မရှိသေးတဲ့အခကျြမြား မြားစှာ ကနျြရှိနပေါသေးတယျ။ Promotions လုပျစရာတှေ အမြားကွီး ကနျြပါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကစားသမားအသဈတှေ ရရှိဖို့ထကျ လကျရှိ ရှိရငျးစှဲ ကစားသမားတှကေို မွဲနအေောငျ ဆှဲထားဖို့က Valve ရဲ့ အဓိက Mission ဖွဈပါတယျ။ (Whale: Game တဈခုရဲ့ Leaderboard ထိပျဆုံးနရော ရောကျဖို့ ငှလေမျးခငျးပွီး သှားလရှေိ့တဲ့ သူမြိူးတှကေို ဆိုလိုပါတယျ)
၅။ The International
Dota2ရဲ့ လူစိတျဝငျစားမှု အမွငျ့မားဆုံးအခြိနျဟာ The International ပွိုငျပှဲကွီးတှေ ကငျြးပတဲ့ Dota Season အပိတျ ကာလဖွဈပါတယျ။ Valve က Dota2ကို ဂရုအစိုကျဆုံးအခြိနျလို့ ပွောရငျလညျး မမှားပါဘူး။ တဈနှဈတာရဲ့ အမွငျ့ဆုံးအခြိနျဖွဈတဲ့ TI ကမြှသာ Valve အနနေဲ့ Dota2ကို ဂရုစိုကျပွတာဟာ Dota2ကို ဒီအခြိနျရောကျမှ ငှရှောရမယျ့ Product တဈခုထကျ ပိုပွီး မမွငျတာလားလို့ သံသယဝငျစရာ ဖွဈလာပါတယျ။ Major/ Minor ပှဲမြားကို Third-Party Organization တှအေား အပွညျ့အဝလုပျကိုငျခှငျ့မပေးတဲ့ Valve ရဲ့ လောဘကွီးမှုဟာလညျး Community နဲ့ တိုကျရိုကျထိတှပေ့ေးမယျ့ Organization တှရေဲ့ စှမျးဆောငျမှုမြားကို မွငျတှခှေ့ငျ့ပြောကျဆုံးစခေဲ့သလို Dota2အတှကျ ဝနျထမျးအဖွဈချေါမထားရငျတောငျ ဒီဇိုငျးအမွဲဆှဲပေးဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈနတေဲ့ Workshop Artist တှအေပျေါမှာလညျး လှနျစှာမှ နညျးပါးတဲ့ Commission ခ အထိ လြှော့ခပြဈခဲ့တဲ့အတှကျ အခုခြိနျမှာ နာမညျကွီး Artist တှလေညျး Valve အတှကျ ready ရှိမနတေော့ပါဘူး။ ဒါတှဟော Player တှနေဲ့ တိုကျရိုကျမသကျဆိုငျပမေယျ့ Dota2Game ကို Update ဖွဈစမှေုအပျေါ တိုကျရိုကျ သှားရောကျ သကျဆိုငျတဲ့အတှကျ Player တှအေပျေါ ကွီးမားတဲ့ နဈနာမှုကွီးတှလေို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
[Image Source: https://www.youtube.com/watch?v=pLAi_cmly6Q]
သွဂုတျလ (၅) ရကျနကေ့ The Dark Side of the Video Game Industry ဆိုတဲ့ Netflix Video လေးတဈခု Youtube မှာတကျလာခဲ့ပါတယျ။ ယနခေ့တျေကွီးရဲ့ Gaming Company ကွီးတှဟော သူတို့ဆီက Designer/ Developer တှကေို တဈပတျမှာ (၇) ရကျ၊ တဈနကေို့ပမျြးမြှ အလုပျခြိနျ ၁၄ နာရီလောကျအထိ အလုပျဆငျးခိုငျးထားပါတယျ။ အစအဆုံး ကိုယျတိုငျတာဝနျယူရတာမြိူး၊ အမှားတဈခုခုလုပျရငျ၊ Error တဈခုခုတကျရငျ ခကျြခငျြးအလုပျထုတျပဈတာမြိူး၊ Game တဈခု update ဖွဈနဖေို့ကို ပွငျးထနျတဲ့ စညျးမဉျြးတှနေဲ့ ခမြှတျတဲ့ Iconic Video Game Company ကွီးတှရေဲ့ နာမညျထဲမှာ Valve တော့ ပါဝငျမလာပါဘူး။ Valve ဟာ ဝနျထမျးအရအေတှကျ လှနျစှာမှာ နညျးသညျ့အပွငျ Game Update ပိုငျးဆိုငျရာမှာ လှနျစှာမှ နှေးကှေးလှနျးတဲ့ အကွောငျးအရငျးကတော့ တခွားဂိမျးကုမ်မဏီကွီးတှလေို နောကျကှယျမှာ ပွငျးထနျတဲ့ စညျးမဉျြးတှေ မရှိတာကွောငျ့လညျးဖွဈနိုငျပမေယျ့ ဒီဂိမျးကို နှဈနှဈကာကာ ကစားနတေဲ့သူတှအေတှကျတော့ ကောငျးမှနျတဲ့ ကြေးဇူးတုံ့ပွနျမှု တဈခု မဟုတျပါဘူး။
Dota2ဟာ Esports ခတျေအကူးအပွောငျးမှာ အဓိက ပါဝငျခဲ့တဲ့ ဂိမျးကောငျးတဈခုဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ Casual Player တှေ ထှကျခှာသှားရငျတောငျ Dota ကို ခဈြမွတျနိုးတဲ့ Hardcore Player စဈစဈ တှကေ ကနျြရှိနဦေးမယျဆိုတဲ့အခကျြဟာလညျး မွကွေီးလကျခကျ မလှဲသခြောပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Valve အတှကျ လုံလောကျတဲ့ အဖွတေဈခုတော့ မဟုတျသေးပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ သက်ကရာဇျ ၂ဝဝဝ ဝနျးကငျြက Playstation 1 ဂိမျးတှေ ခတျေစားခဲ့ခြိနျ ခတျေတဈခုမှာ ကြှနျတျောတို့အတှကျ ရှေးခယျြစရာ ဂိမျး မြားမြားစားစား မရှိခဲ့သလို ပွိုငျဆိုငျမှုလညျး မပွငျးထနျခဲ့ပါဘူး။ လူတိုငျးဟာ Harvest Moon, Final Fantasy, Resident Evil, Metal Gear, NFS, Crash Bandicoot စသညျ့ စသညျ့ နာမညျကွီးသော Game Franchises မြားထဲက အဓိက ရှေးခယျြပွီး မိမိတဈကိုယျရေ အပနျးဖွဖေို့ ကစားခဲ့ကွပမေယျ့ သက်ကရာဇျ ၂ဝ၁၅ နောကျပိုငျးမှာ ဒီအဖွကေ ရာနှုနျးပွညျ့ မမှနျတော့ပါဘူး။ Hardcore Gamer တှအေပွငျ Casual Player တှပေါ အမြားအပွားတိုးပှားလာတဲ့ ခတျေကွီးမှာ လူတှဟော အှနျလိုငျးပျေါမှာ အခငျြးခငျြးပွိုငျဆိုငျကွသလို ဒီ Player Base ကို တိုးပှားလာဖို့ အပွငျးအထနျ ပွိုငျဆိုငျနကွေပါတယျ။ ဒီပွိုငျဆိုငျမှု ရစေီးကွောငျးမှာ အထိုကျအလြောကျ စီးမြောနိုငျခွငျး မရှိရငျ၊ တိုးတကျပွောငျးလဲမှုတှေ မလုပျရငျ Nokia Company ရဲ့ လမျးစဉျမြိူးကို Dota2သိပျမကွာခငျ ရောကျသှားတော့မယျ့အခကျြအား စိုးရိမျစရာအဖွဈ မွငျတှနေ့ရေပါပွီ။
Gabe Newell က ဒါတှကေို သိသိကွီးနဲ့ ဘာကွောငျ့ Dota ကို ဂရုမစိုကျတာလဲ ။?
တကယျတော့ ကြှနျတျောတို့ Player Base ရဲ့ အပွဈလညျး မကငျးပါဘူး။ TI ကာလ ရောကျတိုငျး Dota2ဟာ Twitch ရဲ့ Top View game စာရငျးမှာ အမွဲထိပျဆုံးက ရပျတညျနကွေဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဟာ Dota2ကို မစားဖွဈရငျတောငျ၊ Update တှေ မရှိရငျတောငျ Premium တနျးပွိုငျပှဲတှရှေိရငျ ပှဲကွညျ့မယျ့ ပရိတျသတျက အမွဲရှိပါတယျ။ Dota ကို ပွုစုပြိူးထောငျခဲ့တဲ့ Community က လူတှဟော အခုဆို အသကျ (၃ဝ) ဝနျးကငျြအတနျးတှကေို ရောကျနကွေပါပွီ။ Dota မဆော့ဖွဈတောငျရငျတောငျ ပှဲကွညျ့ဖို့ အဆငျသငျ့ရှိနတေဲ့ ပရိတျသတျတှပွေညျ့နတေဲ့ Dota ဟာ Spectator Esports တဈခုအဖွဈ သိသိသာသာ ပွောငျးလဲလာတာကွောငျ့လညျး ပါပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့က Tier2Dota ကို Support လုပျပေးသငျ့ကွောငျး တဖှဖှပွောကွပမေယျ့ တကယျတနျး Tier2Dota Tournament တှကေို အခြိနျပေးပွီး ကွညျ့ရှူသူ သိသိသာသာ နညျးပါးပါတယျ။ ဒါကို Gaben လညျးသိပါတယျ။ နှဈတိုငျးလညျး Dota2Community ဟာ TI Battlepass ထှကျလာခြိနျမှာ ငှကွေေးအမွောကျအမြားအသုံးပွုဖို့ လကျမတှနျ့တဲ့ Fan တှေ နဲ့ Whale တှအေမွောကျအမြား ရှိနတောကိုလညျး Gaben က ကောငျးကောငျး သိနတောလညျး ပါပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Dota2ဟာ အထိုကျအလြောကျ လလေ့ာသငျယူဖို့ အခြိနျအမြားအပွားလိုအပျတဲ့ ဂိမျးတဈခုပါ။ New Comer တှအေတှကျ အခြိနျပေး Update လုပျမယျ့အစား Dota2Hardcore Fans တှနေဲ့ ပှဲကွညျ့ပရိတျသတျတှကေိုပဲ Target ထားပွီး Dota2ရဲ့ လကျကနျြသကျတမျး ကနျြသလောကျအခြိနျထဲက ငှရေသလောကျယူတော့မယျဆိုတဲ့ အကွံအစညျဟာ New Comer ရှာဖို့ထကျ ပိုမို သခြောတဲ့ ဈေးကှကျဖွဈပွီး Gaben လို စီးပှားရေးသမားတဈယောကျအတှကျတော့ ကြှနျတျောတို့လို သာမနျလူတှထေကျ ၃ ဆငျ့၊ ၄ ဆငျ့ လောကျ ပိုပွီးမွငျထားတဲ့ အခွားအကွောငျးပွခကျြတှလေညျး ရှိနိုငျပါသေးတယျ။
Dota2တဈခုတညျးကိုပဲ ဆှဲဆှဲမွဲမွဲဆော့နတေဲ့ ကစားသမားတှကေတော့ Dota2ရဲ့ အားနညျးခကျြတှခေညျြး ဖျောပွထားတဲ့ ဒီဆောငျးပါးကို မုနျးကောငျးမုနျးနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Dota2တဈခုတညျးကို စူးစိုကျကွညျ့နတေဲ့ မွငျကှငျးကို ခဏလောကျ အနားယူပွီး သက်ကရာဇျ ၂ဝ၂ဝ ရောကျခါနီးကာလမှာ တခွားခတျေပွိုငျ Video Game တှေ ဘယျလိုမြိူး ပွုပွငျပွောငျးလဲနသေလဲဆိုတာကို လိုကျရှာဖှကွေညျ့တဲ့အခါ စာရေးသူရဲ့ သဘောထားကို လကျခံသှားမယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
မညျသို့ပငျဆိုစကောမူ Dota ဆိုတာ Community ကနေ ဖွဈပျေါလာတဲ့ Game တဈခုဖွဈပါတယျ။ အခုလို Update မရှိ၊ ပငျြးစရာ ကောငျးတဲ့ အခွအေနထေိ ဒီလို Player Base ရှိနသေေးတယျဆိုတာကလညျး Dota ဆိုတာ တျောတျောလေး ကောငျးတဲ့ Game တဈခုဖွဈနလေို့ဆိုတဲ့ အခကျြအပွငျ Dota ကို ခဈြတဲ့ Community က အခုထိ ရှိနသေေးတဲ့အတှကျကွောငျ့ဆိုတာ ငွငျးလို့မရပါဘူး။ ပွီးတော့ Dota ဟာ လူတဈဦးတဈယောကျ၊ ကုမ်မဏီတဈခုက အစအဆုံး ဖနျတီးခဲ့တဲ့ Game မြိူး မဟုတျပါဘူး။ (Dota ကို IceFrog က 3rd generation အနနေဲ့ အဆငျ့မွှငျ့တငျပေးတာ မှနျပမေယျ့ Dota ထဲက Hero Concept Idea မြားဟာ အမညျမဖျောတဲ့ Community ထဲက Player မြားရဲ့ Idea မြားသာဖွဈပွီး ဒီ Idea မြားကို IceFrog က အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ မှနျးမံပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ) ဒါကွောငျ့ အခုခြိနျမှာ Dota2Universe ဟာ Valve ရဲ့ လုပျပိုငျခှငျ့အောကျမှာ ရောကျရှိနပေမေယျ့ ဒီ Game ကို ဒီနဒေီ့အခြိနျထိရောကျအောငျ ပွုစုပြိူးထောငျခဲ့တဲ့ Community ရဲ့ အသံတှကေို သခြောနားထောငျပွီး Community ရဲ့ လိုအပျခကျြ၊ ခတျေရဲ့လိုအပျခကျြကို အလြှငျမှီအောငျ ဖွညျ့စညျးပေးမှသာ ကြှနျတျောတို့ ခဈြမွတျနိုးတဲ့ Dota Community ဟာ စညျးကားသိုကျဝနျးတဲ့ အခွအေနကေို ပွနျလညျရောကျရှိလာပွီး အသကျဆကျဖို့အခှငျ့အလမျးတှရှေိလာမှာ အသအေခြာပါပဲ။
October (၃ဝ) ရက်နေ့က Wykrhm Reddy ရဲ့ Tweet တစ်ခုကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ Reddit User တစ်ဦးက Dota2Update တစ်ခု ထုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုထားတဲ့ Thread အောက်မှာ Valve ရဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Cameron က reply ပြန်ထားတဲ့ Comment ကို ဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းအရာက “Outlander Update ကို ပထမဆုံး Major အပြီးမှာ ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး Update ရက် ကိုတော့ အတိအကျ ဖော်ပြဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ရက်အတိအကျ ပြောထားပြီးမှ Update အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့ အချိန်အနည်းငယ်လိုအပ်တာနဲ့ ကြုံရင် ကြိုပြောထားတဲ့အခါ အဆင်မပြေမှာဆိုးလို့” ဆိုတဲ့ သဘောမျိူး ဆောင်တဲ့ Comment ဖြစ်ပါတယ်။
DPC ပေးမယ့် ပထမဆုံး Major ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ MDL Chengdu Major ဟာ November 24 မှာ ပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပြီး Outlander Update teaser ကို ကြေညာခဲ့တာကတော့ သြဂုတ်လ (၂၃) ရက်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ Update ကြေညာချိန်နဲ့ ပထမဆုံး Major ပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ဟာ (၃) လ တိတိ ကွာခြားပါတယ်။ အဲ့ဒီ့နေ့အထိတောင် Update ထွက်ဖို့က တိကျသေချာတဲ့ ရက်စွဲတစ်ခုကို မပေးနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့ reply ဟာ Valve ရဲ့ Dota2အပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်နေတဲ့ လက်ရှိအခြေအနေတွေကို ဖော်ပြလျက်ရှိပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ Dota2ဟာ (၆) နှစ် နီးပါး ကာလအတွင်းမှာ အဆိုးရွားဆုံး ကစားသမားဦးရေ အကျဆင်းဆုံး အခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ Community ကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Video Game တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dota ဟာ Community ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို မဖြည့်စည်းပေးနိုင်တဲ့အခါမှာ ဆိုးရွားတဲ့လမ်းစဉ်ဘက်ကို တဖြည်းဖြည်းချင်းစီ ဦးတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
အဓိက လိုအပ်ချက်တွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာ Game က အထိုက်အလျောက် Update ဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာကို ဦးစွာပြောဖို့ လိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ TI9 မှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ v7.22f ရဲ့ မူလဖြစ်တဲ့ v7.22 ဟာ မေလ (၂၄) ရက်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ TI မှာ အသုံးပြုဖို့ Patch ဖြစ်တာကြောင့် TI ထက် (၃) လ စောပြီး ထွက်ထားတဲ့ မြေပုံကို Balance Change တွေ အထပ်ထပ်ပြုပြင်ပြီး v7.22f ကို အသုံးပြုတယ်ဆိုတာ ပုံမှန်လမ်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Premium တန်းက Player တွေအတွက် Patch တစ်ခုကို အများတန်းတူ အသုံးပြုပေးပြီးတဲ့အခါ TI အပြီးမှာ ဒီ Patch ကြီးကို (၃) လ ကျော် ကြာအောင် ငြီးငွေ့နေတဲ့ Public matchmaking တွေအတွက် Update တစ်ခုက မဖြစ်မနေ ထုတ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အခု Valve ရဲ့ လုပ်ရက်ဟာ TI Patch ကို Balance Change (၂) ခါ လုပ်ပေးထားတာထက် မပိုတဲ့အတွက် Public Matchmaking တွေရဲ့ Meta ဟာ (၅) လ ကြာအောင် မပြောင်းလဲတဲ့ Meta အဟောင်းကြီးဖြစ်နေဆဲပါပဲ။ အခု ထွက်လာတဲ့ သတင်းအရ ဒီ Meta အဟောင်းကြီးကို နောက်ထပ် တစ်လ လောက် ပြောင်းလဲဖို့ ရှိဦးမှာ ဆိုတာကတော့ နှစ်တစ်ဝက်စာ မပြောင်းလဲတဲ့ Meta အပေါ် Casual Player တွေအတွက် စိတ်ပျက်စရာဖြစ်လာတာဟာ မြင်သာတဲ့ ကိစ္စ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချိူ့ကိစ္စတွေက ပိုကောင်းဖို့ စီစဉ်ကာမှ လွဲချော်သွားတာမျိူးတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ (ကောင်းပေမယ့် လူတွေ လိုချင်တာနဲ့ ထပ်တူ မကျနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိူးကို ဆိုလိုတာပါ) Dota ဟာ အပေါင်းအသင်းများနဲ့ ကစားတဲ့အခါ အကောင်းမွန်ဆုံး ဂိမ်းအတွေ့အကြုံကိုရရှိမှာ မှန်ပေမယ့် အပေါင်းအသင်းများနဲ့ မဖြစ်မနေ ကစားဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့ Core MMR, Support MMR စနစ်ဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိူးများ နဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ပထမဆုံးအခက်အခဲအဖြစ် Skill bracket မတူတဲ့သူ (၂) ဦးက Role Abuse လုပ်ပြီး Rank တင်တဲ့ ပြဿနာကို Public Matchmaking တွေမှာ အလူးအလဲ ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒုတိယအခက်အခဲအဖြစ် Party 3-1-1 team vs5party ပြဿနာမျိူးကို ဖြေရှင်းဖို့ Strict Solo Queue ကို ပယ်ဖျက်လိုက်ရာမှ Queue time ပိုကြာတဲ့ ပြဿနာနဲ့ Immortal player တွေကြားမှာ Ancient Bracket အထိ ပါဝင်လာတာမျိူးတွေ ကြုံလာရပါတယ်။ တတိယပြဿနာကတော့ Toxicity ဖြစ်ပါတယ်။ Skill Bracket မျှတမှု မရှိခြင်း၊ Full party အမြဲမရှိနိုင်တဲ့ ကစားသမားတွေအတွက် Fully Party သမားတွေကို နိုင်ဖို့ ခက်ခဲခြင်း၊ Behavior score အပေါ်လွန်စွာ အခြေခံသည့်အတွက် ခြေချော်လက်ချော်ဖြစ်ပြီး Behavior score ကျသွားသော ကစားသမားတွေအတွက် ဆိုးရွားတဲ့ Game အတွေ့အကြုံများ စသည့်အချက်များကြောင့် ကစားသမားတွေရဲ့ Toxicity ဖြစ်မှုဟာ လွန်စွာ မြင့်မားလျှက်ရှိနေပါတယ်။ Valve ဟာ Cheater တွေနဲ့ Toxic ဖြစ်မှုတွေကို ကောင်းကောင်း ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း အခုချိန်ထိ မရှိသေးပါဘူး။
Game တစ်ခုကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လူတန်းစားမှာ Hardcore player နဲ့ Casual player ဆိုပြီး (၂) မျိူး ကွဲပြားပါတယ်။ Dota2ဆော့ရတဲ့ လက်ရှိရည်ရွယ်ချက်ဟာ MMR ဆိုတဲ့ ကိန်းဂဏန်းလေးတွေ တက်ဖို့တစ်ခုတည်းသာ ရှိနေတာက Casual Player တွေများစွာ စွန့်ခွာသွားရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Dota2မှာ Daily Login Bonus, Weekly Rewards, Good player Awards, Free Challenges, Montly Quest တွေ ဘာမှ မရှိတဲ့အပြင် Event တွေလည်း လုပ်ပေးလေ့ မရှိပါဘူး။ အခုကာလ အပိုင်းအခြားဟာ Halloween ကာလဖြစ်ပြီး အခြားသော League of Legends, PUBG, Overwatch, Fortnite, Apex Lgends စတဲ့ Competitive Video Game တွေမှာ Event တွေ ရှိနေပေမယ့် Dota2ကတော့ ဒီနှစ် Outlander Update အတွက် အချိန်ပေးနေရလို့ ဘာ Event မှ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ Announcement တစ်ခုသာ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ Livestreaming, Casual Player တွေဆီကနေ ဈေးကွက်များစွာ ရရှိနိုင်တဲ့အတွက် Valve ရဲ့ ခေတ်ပြိုင် PC Game Company ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Epic, Blizzard, Riot, Electronic Arts တို့ အသီးသီးက အပြိုင်အဆိုင် Player များကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့အချိန် Valve ကတော့ Casual Player တွေကို ဆွဲဆောင် ထားမယ့် အချက်တွေအပေါ် ဂရုစိုက်ခြင်း မရှိပါဘူး။ တစ်လကို $4 ပေးရတဲ့ Dota Plus Features ဟာလည်း ၁ နှစ်မှာ တစ်ခါလောက်သာ Update လုပ်လေ့ရှိတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ထွေထွေထူးထူး မရှိသော Features ကြီး ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် Reward ထွေထွေထူးထူး မရှိတဲ့ Dota2ဟာ MMR ကို စိတ်အပင်ပန်းခံပြီး တင်မနေချင်တဲ့ Casual player တွေအတွက်တော့ Login ဝင်စရာ အကြောင်းပြချက် နည်းပါးသွားတဲ့ Game တစ်အခုဖြစ်လာပြီး Event ကာလမှာ Event ရှိတဲ့ Game တွေဆီကို ရောက်သွားတာမျိူးတွေကြောင့် Player Count တွေ သိသိသာသာ ကျဆင်းလာပါတယ်။
ဒီခေတ်ကြီးဟာ Free to Play Game တို့ရဲ့ ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်။ Game အသစ်တစ်ခုကို စမ်းဆော့ကြည့်ချင်တဲ့ Casual Player တစ်ယောက်ဟာ ပထမဆုံး အဲ့ဒီ့ Game ရဲ့ Cinematic Trailer ကို အရင် ကြည့်ပါတယ်။ အဲ့ဒါက Hype ရင် Hype သလောက် စမ်းဆော့ကြည့်မယ်ဆိုပြီး စတင်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့လို Player တွေ မိမိဂိမ်းကို ရောက်ရှိလာတဲ့အခါ Skin/ Battle Pass/ Tournament တွေ လုပ်ပြီး ဂိမ်းကုမ္မဏီတွေက ပိုက်ဆံ ပြန်ရှာကြပါတယ်။ ဒီလို Skin/ Battle Pass တွေဟာ လူတိုင်းမဝယ်နိုင်ပေမယ့် Casual player, streamers, whale တွေဆီကနေ လွယ်လွယ်ကူကူ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဂိမ်းကို ဒီလို Player စိတ်ဝင်စားဖို့နဲ့ Player Base တက်လာအောင် ဆွဲဆောင်ကြရပါတယ်။ Cinematic Trailer များ၊ Comic များ၊ Event များ၊ Communication များ၊ Animated Short Clip များ၊ ကြော်ငြာများ၊ Game Universe နဲ့ပတ်သတ်သော Lore များအကြောင်း စသည့် Promotion များက New players များကို အဓိက ဆွဲဆောင်တဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုရှိပြီဖြစ်တဲ့ Dota2ရဲ့ Universe ဟာ ရှင်းလင်းဖော်ပြထားခြင်း မရှိသေးတဲ့အချက်များ များစွာ ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ Promotions လုပ်စရာတွေ အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကစားသမားအသစ်တွေ ရရှိဖို့ထက် လက်ရှိ ရှိရင်းစွဲ ကစားသမားတွေကို မြဲနေအောင် ဆွဲထားဖို့က Valve ရဲ့ အဓိက Mission ဖြစ်ပါတယ်။ (Whale: Game တစ်ခုရဲ့ Leaderboard ထိပ်ဆုံးနေရာ ရောက်ဖို့ ငွေလမ်းခင်းပြီး သွားလေ့ရှိတဲ့ သူမျိူးတွေကို ဆိုလိုပါတယ်)
Dota2ရဲ့ လူစိတ်ဝင်စားမှု အမြင့်မားဆုံးအချိန်ဟာ The International ပြိုင်ပွဲကြီးတွေ ကျင်းပတဲ့ Dota Season အပိတ် ကာလဖြစ်ပါတယ်။ Valve က Dota2ကို ဂရုအစိုက်ဆုံးအချိန်လို့ ပြောရင်လည်း မမှားပါဘူး။ တစ်နှစ်တာရဲ့ အမြင့်ဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့ TI ကြမှသာ Valve အနေနဲ့ Dota2ကို ဂရုစိုက်ပြတာဟာ Dota2ကို ဒီအချိန်ရောက်မှ ငွေရှာရမယ့် Product တစ်ခုထက် ပိုပြီး မမြင်တာလားလို့ သံသယဝင်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ Major/ Minor ပွဲများကို Third-Party Organization တွေအား အပြည့်အဝလုပ်ကိုင်ခွင့်မပေးတဲ့ Valve ရဲ့ လောဘကြီးမှုဟာလည်း Community နဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပေးမယ့် Organization တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုများကို မြင်တွေ့ခွင့်ပျောက်ဆုံးစေခဲ့သလို Dota2အတွက် ဝန်ထမ်းအဖြစ်ခေါ်မထားရင်တောင် ဒီဇိုင်းအမြဲဆွဲပေးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ Workshop Artist တွေအပေါ်မှာလည်း လွန်စွာမှ နည်းပါးတဲ့ Commission ခ အထိ လျှော့ချပစ်ခဲ့တဲ့အတွက် အခုချိန်မှာ နာမည်ကြီး Artist တွေလည်း Valve အတွက် ready ရှိမနေတော့ပါဘူး။ ဒါတွေဟာ Player တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်ပေမယ့် Dota2Game ကို Update ဖြစ်စေမှုအပေါ် တိုက်ရိုက် သွားရောက် သက်ဆိုင်တဲ့အတွက် Player တွေအပေါ် ကြီးမားတဲ့ နစ်နာမှုကြီးတွေလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
သြဂုတ်လ (၅) ရက်နေ့က The Dark Side of the Video Game Industry ဆိုတဲ့ Netflix Video လေးတစ်ခု Youtube မှာတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်ကြီးရဲ့ Gaming Company ကြီးတွေဟာ သူတို့ဆီက Designer/ Developer တွေကို တစ်ပတ်မှာ (၇) ရက်၊ တစ်နေ့ကိုပျမ်းမျှ အလုပ်ချိန် ၁၄ နာရီလောက်အထိ အလုပ်ဆင်းခိုင်းထားပါတယ်။ အစအဆုံး ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရတာမျိူး၊ အမှားတစ်ခုခုလုပ်ရင်၊ Error တစ်ခုခုတက်ရင် ချက်ချင်းအလုပ်ထုတ်ပစ်တာမျိူး၊ Game တစ်ခု update ဖြစ်နေဖို့ကို ပြင်းထန်တဲ့ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ချမှတ်တဲ့ Iconic Video Game Company ကြီးတွေရဲ့ နာမည်ထဲမှာ Valve တော့ ပါဝင်မလာပါဘူး။ Valve ဟာ ဝန်ထမ်းအရေအတွက် လွန်စွာမှာ နည်းသည့်အပြင် Game Update ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ လွန်စွာမှ နှေးကွေးလွန်းတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ တခြားဂိမ်းကုမ္မဏီကြီးတွေလို နောက်ကွယ်မှာ ပြင်းထန်တဲ့ စည်းမျဉ်းတွေ မရှိတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဒီဂိမ်းကို နှစ်နှစ်ကာကာ ကစားနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ကောင်းမွန်တဲ့ ကျေးဇူးတုံ့ပြန်မှု တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။
Dota2ဟာ Esports ခေတ်အကူးအပြောင်းမှာ အဓိက ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဂိမ်းကောင်းတစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဒါကြောင့် Casual Player တွေ ထွက်ခွာသွားရင်တောင် Dota ကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ Hardcore Player စစ်စစ် တွေက ကျန်ရှိနေဦးမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာလည်း မြေကြီးလက်ခက် မလွဲသေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Valve အတွက် လုံလောက်တဲ့ အဖြေတစ်ခုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကျွန်တေ်ာတို့ သက္ကရာဇ် ၂ဝဝဝ ဝန်းကျင်က Playstation 1 ဂိမ်းတွေ ခေတ်စားခဲ့ချိန် ခေတ်တစ်ခုမှာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ရွေးချယ်စရာ ဂိမ်း များများစားစား မရှိခဲ့သလို ပြိုင်ဆိုင်မှုလည်း မပြင်းထန်ခဲ့ပါဘူး။ လူတိုင်းဟာ Harvest Moon, Final Fantasy, Resident Evil, Metal Gear, NFS, Crash Bandicoot စသည့် စသည့် နာမည်ကြီးသော Game Franchises များထဲက အဓိက ရွေးချယ်ပြီး မိမိတစ်ကိုယ်ရေ အပန်းဖြေဖို့ ကစားခဲ့ကြပေမယ့် သက္ကရာဇ် ၂ဝ၁၅ နောက်ပိုင်းမှာ ဒီအဖြေက ရာနှုန်းပြည့် မမှန်တော့ပါဘူး။ Hardcore Gamer တွေအပြင် Casual Player တွေပါ အများအပြားတိုးပွားလာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ လူတွေဟာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အချင်းချင်းပြိုင်ဆိုင်ကြသလို ဒီ Player Base ကို တိုးပွားလာဖို့ အပြင်းအထန် ပြိုင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ ဒီပြိုင်ဆိုင်မှု ရေစီးကြောင်းမှာ အထိုက်အလျောက် စီးမျောနိုင်ခြင်း မရှိရင်၊ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ မလုပ်ရင် Nokia Company ရဲ့ လမ်းစဉ်မျိူးကို Dota2သိပ်မကြာခင် ရောက်သွားတော့မယ့်အချက်အား စိုးရိမ်စရာအဖြစ် မြင်တွေ့နေရပါပြီ။
Gabe Newell က ဒါတွေကို သိသိကြီးနဲ့ ဘာကြောင့် Dota ကို ဂရုမစိုက်တာလဲ ။?
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ Player Base ရဲ့ အပြစ်လည်း မကင်းပါဘူး။ TI ကာလ ရောက်တိုင်း Dota2ဟာ Twitch ရဲ့ Top View game စာရင်းမှာ အမြဲထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်နေကြဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ Dota2ကို မစားဖြစ်ရင်တောင်၊ Update တွေ မရှိရင်တောင် Premium တန်းပြိုင်ပွဲတွေရှိရင် ပွဲကြည့်မယ့် ပရိတ်သတ်က အမြဲရှိပါတယ်။ Dota ကို ပြုစုပျိူးထောင်ခဲ့တဲ့ Community က လူတွေဟာ အခုဆို အသက် (၃ဝ) ဝန်းကျင်အတန်းတွေကို ရောက်နေကြပါပြီ။ Dota မဆော့ဖြစ်တောင်ရင်တောင် ပွဲကြည့်ဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေပြည့်နေတဲ့ Dota ဟာ Spectator Esports တစ်ခုအဖြစ် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲလာတာကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က Tier2Dota ကို Support လုပ်ပေးသင့်ကြောင်း တဖွဖွပြောကြပေမယ့် တကယ်တန်း Tier2Dota Tournament တွေကို အချိန်ပေးပြီး ကြည့်ရှူသူ သိသိသာသာ နည်းပါးပါတယ်။ ဒါကို Gaben လည်းသိပါတယ်။ နှစ်တိုင်းလည်း Dota2Community ဟာ TI Battlepass ထွက်လာချိန်မှာ ငွေကြေးအမြောက်အများအသုံးပြုဖို့ လက်မတွန့်တဲ့ Fan တွေ နဲ့ Whale တွေအမြောက်အများ ရှိနေတာကိုလည်း Gaben က ကောင်းကောင်း သိနေတာလည်း ပါပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Dota2ဟာ အထိုက်အလျောက် လေ့လာသင်ယူဖို့ အချိန်အများအပြားလိုအပ်တဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုပါ။ New Comer တွေအတွက် အချိန်ပေး Update လုပ်မယ့်အစား Dota2Hardcore Fans တွေနဲ့ ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်တွေကိုပဲ Target ထားပြီး Dota2ရဲ့ လက်ကျန်သက်တမ်း ကျန်သလောက်အချိန်ထဲက ငွေရသလောက်ယူတော့မယ်ဆိုတဲ့ အကြံအစည်ဟာ New Comer ရှာဖို့ထက် ပိုမို သေချာတဲ့ ဈေးကွက်ဖြစ်ပြီး Gaben လို စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်အတွက်တော့ ကျွန်တော်တို့လို သာမန်လူတွေထက် ၃ ဆင့်၊ ၄ ဆင့် လောက် ပိုပြီးမြင်ထားတဲ့ အခြားအကြောင်းပြချက်တွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
Dota2တစ်ခုတည်းကိုပဲ ဆွဲဆွဲမြဲမြဲဆော့နေတဲ့ ကစားသမားတွေကတော့ Dota2ရဲ့ အားနည်းချက်တွေချည်း ဖော်ပြထားတဲ့ ဒီဆောင်းပါးကို မုန်းကောင်းမုန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Dota2တစ်ခုတည်းကို စူးစိုက်ကြည့်နေတဲ့ မြင်ကွင်းကို ခဏလောက် အနားယူပြီး သက္ကရာဇ် ၂ဝ၂ဝ ရောက်ခါနီးကာလမှာ တခြားခေတ်ပြိုင် Video Game တွေ ဘယ်လိုမျိူး ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေသလဲဆိုတာကို လိုက်ရှာဖွေကြည့်တဲ့အခါ စာရေးသူရဲ့ သဘောထားကို လက်ခံသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Dota ဆိုတာ Community ကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Game တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို Update မရှိ၊ ပျင်းစရာ ကောင်းတဲ့ အခြေအနေထိ ဒီလို Player Base ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကလည်း Dota ဆိုတာ တော်တော်လေး ကောင်းတဲ့ Game တစ်ခုဖြစ်နေလို့ဆိုတဲ့ အချက်အပြင် Dota ကို ချစ်တဲ့ Community က အခုထိ ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ပြီးတော့ Dota ဟာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၊ ကုမ္မဏီတစ်ခုက အစအဆုံး ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Game မျိူး မဟုတ်ပါဘူး။ (Dota ကို IceFrog က 3rd generation အနေနဲ့ အဆင့်မြှင့်တင်ပေးတာ မှန်ပေမယ့် Dota ထဲက Hero Concept Idea များဟာ အမည်မဖော်တဲ့ Community ထဲက Player များရဲ့ Idea များသာဖြစ်ပြီး ဒီ Idea များကို IceFrog က အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မွန်းမံပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်) ဒါကြောင့် အခုချိန်မှာ Dota2Universe ဟာ Valve ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အောက်မှာ ရောက်ရှိနေပေမယ့် ဒီ Game ကို ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိရောက်အောင် ပြုစုပျိူးထောင်ခဲ့တဲ့ Community ရဲ့ အသံတွေကို သေချာနားထောင်ပြီး Community ရဲ့ လိုအပ်ချက်၊ ခေတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို အလျှင်မှီအောင် ဖြည့်စည်းပေးမှသာ ကျွန်တော်တို့ ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ Dota Community ဟာ စည်းကားသိုက်ဝန်းတဲ့ အခြေအနေကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး အသက်ဆက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေရှိလာမှာ အသေအချာပါပဲ။